Sicela umasipala usilalele masikhala | News24
Sicela umasipala usilalele masikhala
MHLELI kwelakho iphephandaba ngibonge ukuthola ithuba yize umoya wami ungaphathekile kahle ngendlela izinto ezenzeka ngayo endaweni yethu KwaPata ka-Ward 10.
Sinenkinga mhleli yokungasizakali ehhovisini lekhansela masidinga incwadi yekhansela.
Uma siya ehhovisi elisedolobheni basitshela ukuthi masiye kozithatha ekhanseleni ngakithi. Lezi ncwadi ziyadingeka uma udinga okuyoshayela umuntu ipasi. Uma sifika ehhovisini lekhansela sizicela kunobhala uvele akulandisa inganekwane ongayazi obona kahle ukuthi ayihlangani nalento oyizele. Uvele abike imbiba abike ibuzi akutshele ukuthi umshini awusebenzi njalo nje uma udinga usizo awulutholi. Kungani umasipala ungasiqasheli okungenani unobhala ozoba sedolobheni lapho kuthathwa khona izincwadi zamakhansela unobhala ozokwazi ukusenzela lezincwadi ezibalulekile.
Lento iyasihlukumeza siwumphakathi phambilini kukaningi amalungu omphakathi ekhala ngendlela unobhala angakwazi ngayo ukubasiza kanti futhi kuphinde kube nezinsuku ongamfici ngazo ehhovisini. Ngabe kumele yini kube kanje umasipala uthule uthini sihlukumezeka siwumphakathi singasizakali kodwa sibe savota ngoba sithi sifuna impilo engcono?
Siyacela lesikhalazo sethu siwumphakathi sike sisukunyelwe phezulu.
l Iungu lomphakathi kwaPata